Dream Art Studio kwi Gunks
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSerg
Esi situdiyo sobugcisa sale mihla sayilwa ukusuka emhlabeni ukuya phezulu kwaye senziwe ngobuchule ngamagcisa alapha ekhaya ukuze wonwabele ukubaleka okuzolileyo kubomi besixeko obuphithizelayo. Licwecwe lobugcisa lodwa, kwaye ligcwele ngokupheleleyo zonke izinto eziyimfuneko ozidingayo endlwini.
Yonwabela indawo yomlilo eqingqiweyo yamatye ekhethekileyo, itafile eyenziwe ngesandla, ubugcisa bodonga loqobo, isofa yesikhumba kunye nesitulo, ifestile enkulu ijonge ehlathini.
4.88 out of 5 stars from 574 reviews
4.88 · Izimvo eziyi-574
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi574
Isitudiyo simi phezu kweShawangunk Ridge, (IiGunks) ingqongwe lihlathi lepine, amatye egranite kunye nemibono ephefumlayo.
Yimayile enye kuphela ukusuka kwindawo entle iStony Kill Falls
Ngaphakathi kweemayile ezi-4 ezimfutshane kukho indawo yokungena kwipaki yelizwe laseMinnewaska, enemizila yayo yokukhwela ibhayisekile egcinwe kakuhle, amachibi acwengileyo anokuqubha, iindledlana zokuhamba intaba, ukunyuka kwamatye kunye neembono eziphefumlayo zentlambo ye-Hudson ukusuka ngaphezulu kweemitha ezingama-2,000 ukuphakama.
Kwindawo ekufutshane kukho ii-wineries ezi-4, iindawo zokutyela ezininzi ezibandakanya iBrauhaus eyaziwayo
Amaziko obugcisa, iifama zendalo, ukutyibiliza ekhephini, ukuntywila kwisibhakabhaka, iparagliding kunye nezinye ezininzi.
Ababuki zindwendwe banobungane abathandana bendawo kwaye bayakuvuyela ukwabelana ngolwazi lwabo ngeendawo ezigqwesileyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zemisebenzi yendawo kunye neendwendwe zendlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Serg
Uya kuba nendlu yakho, kodwa siya kuba sijikeleze indawo, kwaye sifumaneke ukuba sibhalele okanye sithumele i-imeyile okanye iifowuni zikaxakeka. Ukhuseleko lweeseli lunebala kwindawo yethu, kodwa sinothungelwano lwe-wi-fi olunoqhagamshelwano olulungileyo.
Uya kuba nendlu yakho, kodwa siya kuba sijikeleze indawo, kwaye sifumaneke ukuba sibhalele okanye sithumele i-imeyile okanye iifowuni zikaxakeka. Ukhuseleko lweeseli lunebala kwind…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kerhonkson